विदेशी टवर रक्षा
एलियन्स यो अचम्मलाग्दो जंगल आक्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई केवल एक मात्र हो जुन केहि रणनीतिहरु संग गर्न सक्छ जुन उनीहरूले खाडीमा राख्छन्। तपाईं यस टॉवर रक्षा खेल मा धेरै turrets राख्न हुनेछ र तपाईं तिनीहरूलाई राम्रो हुनुपर्छ वा एलियंस हुनेछ
डेस्कटप टावर रक्षा
टावर बाहिर आफ्नो आफ्नै Maze सिर्जना गरेर ढोंगी को आगमन छालहरू रोक्नुहोस्। विभिन्न खेल मोड समावेश छ।
शत्रु आक्रमण रोक्न रक्षा टावर निर्माण। तिनीहरूले सडकको अन्त पुग्न अघि सबै शत्रु एकाइहरु नष्ट। तिनीहरूले आफ्नो रक्षा पारित यदि तपाईं जीवन ढीले हुनेछ।
Warzone उच्च-प्रविधी हथियार र बदलिने परिदृश्य संग ठूलो खुला नक्सा सुविधा एक टावर रक्षा खेल हो। खेल को लक्ष्य बस सकेसम्म लामो समयसम्म बाँच्न छ। विभिन्न खेल नयाँ लागि देख गर्नेहरूका लागि मोड उपलब्ध पनि छन्
तपाईं रातो खेलाडी छन्। सबै शत्रु महल लिन (तटस्थ महल खैरो छन्)। क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं आक्रमण गर्न चाहेको महल गर्न तान्नुहोस्। यो छिटो-paced रणनीति खेल चुनौतीहरू एक धेरै!
turret टावर आक्रमण
तपाईं stickmen को टाउको snipe रूपमा आफ्नो पर्खाल रक्षा। आफ्नो बन्दूक अपग्रेड गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सामना गर्न पर्खाल।
आफ्नो टावर अपग्रेड गर्नुहोस् र शत्रुको सैनिक, ट्यांक, डुङ्गा र विमानहरु विरुद्ध रक्षा गर्न turrets को निर्माण।
बस TDS गोली
अपग्रेड, कौशल, बन्दुक को धेरै संग शीर्ष-तल नरसंहार शूटर।
कब्जाको td अन्तर्गत शहर
रणनीतिक टावर राख्न र यो निःशुल्क अनलाइन टावर रक्षा खेल मा हमला गर्दै छन् कि राक्षस बन्द रोक्नु!
जब पेंगुइन td आक्रमण
आफ्नो turrets को ठाँउ पेंगुइन सही तिर मार्च रूपमा। तिनीहरूलाई अब विस्फोट गर्न एक Maze गर्नुहोस्।
जब पेंगुइन आक्रमण td 2
यो मूल पेन्गुइन Name आक्रमण टीडी खेल गर्न sequel छ। खेलाडी र पेंगुइन नष्ट र टावर उन्नयन गरेर अनुभव अंक निर्माण; प्रत्येक स्तर माथि तिनीहरूले यस्तो अतिरिक्त सुरूवात नगद वा नयाँ टावर रूपमा भत्तों प्राप्त गर्न सक्छन्।
पेंगुइन आक्रमण td 3
यो पेंगुइन मा Marching छन्। तिनीहरू आफ्नो इलाका मार्फत सही जाँदैछन् र तिनीहरूलाई रोक्न समय छ। बुद्धिमानीसाथ हतियार गरेर।
जाल र sorcery
धरहरालाई रक्षा खेल धराप र Sorcery मा प्रत्येक स्तर जीत रणनीतिक ठाउँमा पासो र राख्दै रक्षक प्रयोग गरेर सबै शत्रु एकाइहरु नष्ट गर्न छ।
श्राप धन levelpack
लोकप्रिय टावर रक्षा खेल श्राप खजाना लागि स्तर पैक। को orcs, दुष्ट को दुष्ट अधिपति र undead रूपमा भूमिका लिन र धार्मिक नायक द्वारा चोरी हुनबाट तपाईं रत्न सुरक्षा
प्रेत टावर रक्षा 4
50 स्तर मा प्रेत भीड पराजित तपाईं आफ्नो turrets को अपग्रेड गर्नुहोस् र जीवित रहन!
मुक्तिदाता टावर रक्षा
एक मोड संग एक टावर रक्षा, मुक्तिदाता Kailgerwrath को hordes विरुद्ध लाइट को राज्यहरू पक्षमा आफ्नो संघर्ष को सुन्दर अनुवाद कथा छ। यो रक्षा खेल मा तपाईं एक अद्वितीय कास्टिंग सिस्टम प्रयोग, सुरक्षा को संरक्षक र बोलाउन पर्छ। ई
केक समुद्री डाकू
यो प्यारा turret रक्षा खेल मा दुष्ट 'केक डाकू' विरुद्ध आफ्नो केक रक्षा। तान्न र आफ्नो किल्लाहरू ड्रप र यी basterds पराजित माउस प्रयोग!
यो नयाँ रक्षक खेल मा दुष्ट क्रिसमस Critters देखि सान्ता कार्यशाला रक्षा।
यो टावर रक्षा खेल मा escaping देखि मानिसहरूलाई राख्न आफ्नो पशु गार्ड राख्न।
अनन्त टावर पूर्ण जीवन संस्करण
यो खेल अनन्त टावर को एक पूर्ण जीवन संस्करण हो। तपाईं आफ्नो शक्ति वृद्धि, आफ्नो बुद्धि भारी राक्षस को घेराबन्दीको तोड्न प्रयोग र अनुपम तरवार फेला पार्न आवश्यक छ। के तपाईं अन्तमा विजय जीत हुनेछ, आफैलाई मा एक साहसी warrior.Believe छन्!
9 फरक टावर संग विभिन्न प्रकारका Ravens अतिक्रमण विरुद्ध रक्षा।
आफ्नो Tesla टावर तपाईंको स्थिति रक्षा। अपग्रेड गर्नुहोस् र तपाईं क्लिक गर्नुहोस् वा तान्नुहोस् रूपमा खाडी शत्रुहरूले राख्न।
फेरि, तपाईं जर्मन आक्रमण विरुद्ध ठोस रक्षा निर्माण मार्फत दुष्ट को पकड देखि आमा रूस रक्षा गर्नुपर्छ। प्रयास फरक आक्रामक हटाउन बनाउँछ र रणनीति। तपाईं त होसियार whe हुन आफ्नो संरचना बृद्धि गर्न आवश्यक यो समय
गहिरो टावर रक्षा
एक लागिपरेको राष्ट्रको रक्षा को आदेश मान, र शत्रु सैनिकहरु को आउँदै भीड रोक्न? एक टावर निर्माण रद्द गर्न किबोर्डमा भाग्ने प्रयोग गर्नुहोस्।
दोषी संसारमा टावर रक्षा
यो चुनौतीपूर्ण टावर रक्षा खेल मा Colossal राक्षस को hordes देखि आफ्नो आधार रक्षा!
acorns को छालहरू मार्न squirrels आफ्नो सेना निर्माण। आधारभूत तर राम्रो balenced टीडी सबै छ भनेर विभिन्न असर6टावर को एक चयन छ।
तपाईंको मुख्य उद्देश्य शत्रुहरूको अथक onslaught देखि उनको टावर रक्षा गरेर राजकुमारी रक्षा गर्न छ। यो के गर्न तपाईं शत्रु सैनिकहरू छान्न र स्क्रिनको त पक्ष तिनीहरूलाई बन्द फेंक पर्छ। एक शक्ति सक्रिय लागि, केवल corresp चयन
आक्रमण गर्ने प्रयास कीरा को छालहरू बाहिर लिन turrets को विभिन्न प्रकारका ठाँउ।
Bloons टावर रक्षा 4
हाम्रो Bloon बाँदर अझै licked छैन - उहाँले कसैले गरेको व्यवसाय जस्तै रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्ष नयाँ Bloons विनाश लागि छ के नयाँ उपकरण बाँदर हेर्नुहोस्!
हावा रक्षा 3
जस्तै मिसाइल आदेश को सर्ट, तर एकदम। यो मा खेल ट्युटोरियल मार्फत जाने तिर्न सक्छ त, यो सुन्दर shoot'em अप खेल धेरै। रमाइलो र धेरै Addicting खेल प्ले धेरै।
दोषी टावर रक्षा
क्षुद्रग्रह र अन्य वस्तुहरू टावर प्रयोग विरुद्ध पृथ्वी रक्षा
Frontline रक्षा 2
Frontline रक्षा2एक फ्लैश अनलाइन खेल हो। रणनीतिक शत्रुहरू को छालहरू विरुद्ध आफ्नो सेना राख्न। आफ्नो स्थानीय युद्ध-मार्ट मा विनाशको नयाँ हतियार लागि पसल र तिनीहरूलाई अधिकतम क्षति व्यवहार अपग्रेड!
मौलिक टावर रक्षा
मौलिक टावर रक्षा आधुनिक अवधारणा संग मौलिक टावर संयोजन एक रोचक टीडी खेल हो। म एक समय को लागि यो खेल खेले र यो एकदम मजा छ! यो कष्टप्रद छन् जो केही कुराहरू (जनरेटर चार्ज) भए तापनि तिनीहरूले एक एक चुनौती थप्न
नियमित टावर रक्षा खेल, एक litle लात संग। यहाँ तपाईँले शत्रु महल मलियामेट गर्न, अनि किल्लाहरू संग आगमन राक्षस againts रक्षा नायक पठाउन छन्।
ग्लास मा टावर हृदय
रणनीति रक्षा खेल 'भएको टावर र दिल ग्लास मा' तपाईं पहिले टावर बोतल हृदय निर्माण र ठाँउ छ, त तपाईं रक्षा गर्न गर्यौं ...
महल नाश 2
पनि क्रशिंग र Arcturia कब्जा पछि Redvonian राजा अझै थप महल दबाउन लागि तिर्सना थियो। अफवाह राजा Blutias Crushtania रूपमा चिनिने यो Redvonian राजा तिनीहरूलाई चोट चाहन्छ द्वीप आफ्नो क्लस्टर मा sturdier महल निर्माण गरेको छ कि यो छ।
रणनीति को मिश्रण र मध्ययुगीन रक्षा खेल मा शूटिंग। को अतिक्रमण जहाज आफ्नो शहर रक्षा। तिनीहरूलाई sunk गर्न Cannons र बारूद विभिन्न प्रकारका प्रयोग!
मंगल 2180 खेल
चयन गर्नुहोस् र टाढा ढोंगी को शत्रु छालहरू राख्न turrets को निर्माण। turrets को शक्तिशाली बनाउन तारा प्रयोग गर्नुहोस्।
turret रक्षा 2
शत्रु सैनिकहरू आफ्नो turret रक्षा।